HomeAfaan OromooOduu SQ fi RSWO – Lolli Uummata Oromoo WALLOO irratti, Ebla 4, 2019
#Uummata araddaa isaanii irraa buqqaasuuf tarkaanfii waraanni mootummaa fudhate dura dhaabbachuudhaan gaaga’amni uummata Oromoo bakkichaa muraasa irra erga gahee babal’atee akka hedduminaan hingaagane WBO’n ittisa uummataaf taasiseen baraaree jira
[SQ, Eebla 4,2019] Wallagga Lixaa Ayiraa keessatti waraanni mootummaa mana uummataa Boonbii itti darbatee gube, aradaarraa ammoo qabeenyaa uummataa Giraaviliyaa, Buna, Cidii dabalatee waan hedduu barbadeesse. Gochaan kun guyyaa dheengaddaa akka lakkoofsa Habashaatti 23,07, 2011 ganama sa’atii 3:00 irra eegalee raawwate jedhu namni qabeenyi duraa gubate Kan nuti dubbifne. Jiraataan Oromoo bakkichaa obbo Gammachuu Daggafaa Galataa yaada nuu laaten “waraanni mootummaa raayyaan ittisa biyyaa nama 30, Korri Bittinneessaa nama 18, walii gala nama 48 ta’anii ganda Hoomoo Sichii naannoo mana kootii dhufan” jedhu. Itti fufuun “gara mana kootti dhufaa jiraachuu dursee odeeffannoon waan na gaheef ofiikootiis manaa baqadhee maatiikoos manaa baaseen jira an. Kana booddee ofii gaara mana koo cinaa irra dhaabbadheen gadi ilaalaa maatiikoo laga Bunaan buuse” jedhu.
Sanaa booda maaltu akka uumame yeroo dubbatan “mana kootti dhufanii naannaa’ani. Meeshaa waraanaa Bireenii baatanii deemu. Erga Bireenii isaanii dhadhaabbatanii hunduu bakka bakka qabatee jedhee booddee; nama afur gara manakootti ergan; mana keessatti waa qopheessan mana citaan qaba isatti abidda kahan. Gaafa mana kanatti abidda ka’an abiddi qabate. Haatikoo jaartii dulloomtuu waggaa 60 taatudha. Manni ishee manakootti aanee waan jiruuf fiigdee dhaqxee iyyite. Iyyitee jennaan haadhakoo rukutanii achii ari’an. Manni citaa kiyyas gubatee; Sana boodas lafa qabatee boba’uu jalqabe. Qabeenyi an qabus keessa gubate. Qabeenyaankoo mana keessa gubate: Buna kuntaala 11, fi uffannaa, maallaqan qabus hundumtuu keessa gubate. Waan tokkollee naan hinbaane horiin lamas nii du’an. Fageenyaa irraa meeshaa waraanaa Dishqaa dhukaasuudhaan mana Qonnaan bultoota naannichaas gubani. Mandara keessa deemanii nama reebuu, tumuu manaa ari’uu jalqabani. Namni naannichaas baqatee lubbuu baafatee. Kana gidduuttii waraanni Bilisummaa Oromoo dirmatnaa nuu gochuun toora sa’a 6 akka tasaa bakkicha dhufee waraana mootummaa mana kiyya dabalatee mana Qote Bultoota naannichaa 5 abiddaan gubee uummata manaa ari’aa jiru arganii dhukaasa walitti banan. Lolli sunis sa’a tokkoof walakkaa fudhatee waraana mootummaa nu fixuu dhufe ittisa WBO’n godheen akka nurraa deebi’u ta’e.” Jedha namni manni duraa gubate Obbo Gammachuu Daggafaa Galataa
“Lolli gaafa sanaa kanaan turee, ammas dabalataan waraanni mootummaa Bulanii dhufan” jedha. Borumtaasaammoo mana jireenyaa isaa kan Qorqorroo Baallee jaatamaa Boonbii itti darbatanii gubuu isaanii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaaseera.
“Qorqorroo Baallee jaatamaa Boonbii itti darbatanii gubanii, Buna Sangaa Afur, Giraaaraaviiliya, Cidii, Mangoo, Paappayyaa, Habukaadoo ataakiltiin qabu hundumaa na duraa barbadeessanii jiru” jechuun Obbo Gammachuu Daggafaa Galataa yaada Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniiru
Namoota manni duraa gubate maqaa isaanii beektuu? Jedhee Kan SQ’n gaafateef maqaa namoota manni duraa gubatee “Ana Obbo Gammachuu Daggafaa Galataa duraa Qorqorroo Baallee jaatamaa mana citaa mana guddaa faana mana lama guban, mana Obbo Karrasaa Jabeessaa Qorqorroo Baallee jaatamaa innis manni itti nyaata qopheessan manni citaanis duuka duraa gubate, mana abbaa isaatii Jabeessaa Yaadataas innis Qorqorroo duraa gubate, mana Kennasaa Jabeessaa mana citaa duraa gubate, mana Obbo Xibabuu Ashanaa kan jedhamu ammoo cabsanii seenanii meeshaa inni qabu caccabsanii deemani; jabbootni lama ammoo utuu dheedaa jirtuu rasaasa waraanni mootummaa dhukaasuun duuteetti jedhu. Manneen gubatan kana keessaa midhaan, maallaqni teessumni jira” jedhu Obbo Gammachuu Daggafaa Galataa yaada Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin.
Gochaan kun eessatti akka raawwate yoo ibsan “Wallagga Lixaa Aanaa Ayiraa Ganda Hoomoo Sichii mandaraa Halaakaa jedhama” jedhu jiraataan qabeenyi guutummaatti waraana mootummaatiin duraa barbadaa’e kun.
Obbo Gammachuu Daggafaa Galataa qabeenyaa qaban kan araddaa irraas mannis duraa barbadaa’uu yaada isaaniirraa hubachuun dandaa’ameera. Kanarrattuu qaamni mootummaa lubbuu isaanii balleessuuf bilbilanii itti dhaadataa akka jiran dubbatu Obbo Gammachuun.
“Erga waraanni mootummaa manneen uummataa gubuu jalqabee, waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n ittisa godhuuf, qaamni mootummaan bobbaase waraanni mootummaa tarkaanfii wal fakkaataa darbanii akka uummata irratti hinfudhanneef WBO’n ittisa godhe” jechuun yaada bilbilaan nuu laataniin ibsu Obbo Gammachuu Daggafaa Galataa. Waraana mootummaa dursee WBO’n naannicha Kan hinturre ta’uuf halaalarraa balaa dhaqqabaa jiru dhaga’ee kan bakkichatti argamee uummataaf tarkaanfii ittisaa fudhate ta’uullee gabaasanii jiru.
“Haalli nageenya naannichaa baay’ee yaaddessaa ta’ee jira” jedhu Obbo Gammachuun. “An erga gaafa Dafinoo(Wiixata) ganama sa’a 12 manaa bahee maatiikoo hinargatinan jira. Uummatni naannichaas Ayira keessaa gara Gullisootti baqatee lubbuu baafataa jira. Manni hedduun gubatee jira walii dirmatee wal gaafachuuf namni hindanda’u. Waraanni mootummaa humnaan naannichaa irra socho’aa waan jiruuf yaaddeessee jira” jechuun waan qaban hundarraa addaan bahanii jiraachuu Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaasan.
Balaan lubbuu namaarra gahe jiraa? Gaaffii SQ’n jedhee gaafateef deebii laataniin barataan oladeemaan tokko rasaasa dhuka’uun ajjeefamuu dubbatan. Maqaa barataa sanaas beekuu hindandeenye sababa waraanni mootummaa bakkicharra buufatee jiruuf jedhu.
Rakkoo kun sababaa maalii isinirraa gahe. Akka isaan mana keessan gubaniif sababaan maali jechuun kan gaafanneef WBO nyaachiftee WBO soorte, nii keessummeessite jechuun akka ta’e dubbatu Obbo Gammachuun.
Dhumarratti dhaamsa dabarsaniin “Mootummaan kun jalqaba karaa nagaa qabsaa’aa jedhee waraana kanaaf karaa saaqee ka’ee uummatni Waraana kana jaallachuuf duukaa hiriiruu isaa gaabbee WBO irratti dhukaasa banuusaa uummatni Oromoo hubachuu akka qabun dhaamsa dabarfadha!” Jechuun obbo Gammachuu Daggafaa Galataa yaada Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin dabarfatu.
“Waraanni mootummaa qabeenyaa kiyya cufa na duraa guban” jedhu jiraataan Gujii Lixaa Tooree Qarsaa.
[SQ, Eebla 4, 2019] Guyyaa kaleessaa Eebla 3, 2019 waraanni mootummaa qabeenya qote bulaa Oromoo Gujii Lixaa keessaa mana waliin gubanii balleessan. Obbo Uddeessaa namni jedhamu jiraataa Gujii Lixaati. Waraanni mootummaa fi caasaan mootummaa waliin ta’uudhaan ati waraana Bilisummaa Oromoo soorta maqaa jedhuun mana jireenyaa isaa duraa guban.
Qote bulaan kun yaada Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin “qabeenyaan qabu cufa guban!” Jedha. Qabeenya keessan eenyu barbadeesse jennee gaafanneerra. Akka Qote Bulaan Oromoo kun jedhutti waraanni mootummaa Raayyaa ittisa biyyaa, Kora Bittinneessaa Oromiyaa fi milishaa Gandaa dabalatanii mana kiyya guban jedha.
Jiraattota bakkichaa duraa mana gubuuf ammallee akka waraanni mootummaa sochiitti jiru dubbatu. “Qabeenyaan kiyya Birrii Kuma digdamaaf kum sadii (23000), qabeenyaan ittiin loon tiksu kanan Birrii kuma 50 (50,000) bite keessa gubate, Midhaan hedduu gubate, saanduqni illee hinafne,” jedhu Obbo Uddeessaan.
Gochaan kun kaleessa sa’a 10 irratti narratti raawwate kan jedhan, Qote Bulaan Oromoo kun lubbuu beeyladaa irraan balaan dhaqqabe jiraa? Jennee Kan gaafanneef Lukkuun 10 mana keessa gubachuu Obbo Uddeessaan Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromootti himan.
Dhumarrattis uummatni Oromoo dirmachuufii akka qabuuf dhaammatan